Madasha sawirrada ee toddobaadkan
You are here: Home Home Madasha sawirrada ee toddobaadkan
Toddobaadkanna waxa madasha sawirrada inoogu marti ah sawir taariikhiya. Waa magaalada Addis Ababa iyo 1993kii.
Waa bishii Maarj. Waa madal ay ku kulansanaayeen ururro ka socday dalka Soomaaliya oo halkaa loogu qabtay laba shir oo dibuheshiisiineed. Mid wuxu qabsoomay bishii Jeeniweri, ka labaadna bishii Maarj 1993kii. Waxa shirarkaa ka qayb-galay labadii jeerba wefdi goob-jooge ka ahaa oo ka socday SNM. Wefdigii Jeeniweri waxa hoggaaminayay Ibraahin Meygaag Samatar oo markaa ahaa Guddoonshihii Golaha Dhexe ee SNM, wefdigii labaadna waxa hoggaaminayay Boobe Yuusuf Ducaale oo ahaa Xoghayihii Warfaafinta isla markaana ka wakiil ahaa Guddoomiyihii SNM, Cabdiraxmaan Axmed Cali (Tuur). Sawirkan oo lagu qaaday madashii ay shirarkaasi ka dhacayeen, waxa ka muuqda Boobe Yuusuf Ducaale oo salaamayaa Maxamed Faarax Caydiid oo hoggaaminayay ururradii ku bahoobay dalladdii SNA